တစ်ခုလပ်မိန်းမပျို – Grab Love Story
ကျွန်တော်၏ အလုပ်မှာ မမယွန်း တို့ ဖွင့်ထားသော အိမ်ဆိုင်လေးကို နေ့စဉ် မုန့် ပို့ပေးရပါသည်. မိဘတွေခြင်းလည်း ရင်းနှီးကြသော ဒီနှစ်အိမ်တွင် ကျွန်တော့်အတွက် မမယွန်းတို့မိသားစုနဲ့စားအိမ်သောက်အိမ်ပဲပေါ့ . အေးချမ်းတည်ငြိမ်သော အပြုံးပိုင်ရှင်နှင့် စကားပြောဖြစ်ရင် ပိုပျော်သလိုပါပဲ.စိတ်မကောင်းစရာတခုကတော့မမယွန်း ဟာ ဆေးသမားယောကျာ်းနဲ့ အပြီးကွဲကွာထားတည့် တစ်ခုလပ်မိန်းမပျိုပေါ့. ကျွန်တော်အသက်နှစ်ဆယ့်ရှစ် မမက သုံးဆယ့်ငါး မမ အိမ်ထောင်ပျက်သွားတာ သုံးနှစ်ကျော်အချိန် တနေ့မှာပေါ့ လေ. ပို့ နေကြ မုန့်တွေနဲ့ မမယွန်းတို့ အိမ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ဟာ လူတစ်ယောက်မှ မတွေ့ရသော အခက်ကျုံနေရသည် အပေါ့ သွားချင်စိတ်ဖြစ်လာသော ကျွန်တော် နောက်ဖေးသို့ သွားခိုက် မထင်မှတ်ပဲ ညည်းသံသဲ့ သဲ့ ကို ကြားမိလိုက်သည်. မိန်းမတစ်ယောက်၏ အသံ…. မမယွန်း ၏အသံ. ရပ်တန့် သွားသော ခြေထောက်သည်။
အလိုလို အခန်းဘေးသို့ကပ်မိသွားသည်.ဟနေသော သုံးထပ်သားကြားမှ မြင်လိုက်မိသည်က မမယွန်း ၏ နံရံမှီထားသော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လှုပ်ရှားနေသော လက်အစုံ, သေချာကြည့်လိုက်တော့ မမသန့် သူ့မိန်းမ အင်္ဂါကို ခရမ်းသီးနဲ့ကလိနေသည်. သွားပြီ စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ ပြဒ်သနာတက်လာသည်က ကျွန်တော့် ပစ္စည်းတင်းတောင်လာသည်. ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိနိုင်သော စိတ်တွေသည် မမသန့်ဘေးနားကို အပြေးသွားချင်နေမိသည်. မမသန့် ကာမစိတ်ဆာလောင်နေသည် ကျွန်တော်လည်း ရမက်စိတ်တွေ တင်းမာနေပြီ. ထိုစဉ် ကျယ်လောင်သော ဖုန်းသီချင်းသံသည် ကျွန်တော့်ခါးမှမည်နေသည်. ကျွန်တော်ရော အခန်းထဲမှ မမရော လန့် သွားသည်. သွားပြီ တချိန်တည်း မမသန့် လှန်ထားသော ထမိန်ကိုအမြန်ချပြီး အခန်းပြင်သို့ ထွက်လာရာ အားနာကြောက်ရွံ့ စွာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွားသည်။ ထိတ်လန့် စွာ ခေါင်းငုံ့ ထားသော ကျွန်တော့်ေ့ ရှသို့ မမရောက်ရှိလာပြီ။
အားနာမိသော အကြည့်များဖြင့် ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေစဉ် တည်ကြည်သောမျက်နှာထားဖြင့် ‘မင်း ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ, ဘာမြင်ထားလဲ အမှန်အတိုင်းပြောပါ’ ဆိုသော စကားလုံးများပြောလာသည်. တိတ်ဆိတ်နေသော ကျွန်တော့်အတွက် အမှန်ကိုပြောမထွက်နိုင်. ‘မေးနေတယ်လေ မောင်လေး’ လို့ ပြောလာပြန်သည်. ‘ဟုတ် အစ်မ’ ကျွန်တော်ပြောသောအခါ ‘ဟုတ်ပါပြီ မမြင်သလိုပဲ ထားလိုက်တော့ မောင်လေး အမခွင့်လွှတ်ပါတယ်’ ကျွန်တော်လည်း ‘ဟုတ်အမကို ကျေးဇူးပါပဲ’ လို့ ပြောပြီး နောက်ဖေးအိမ်သာ ဆီသို့ သွားခဲ့သည်. မြင်ခဲ့မိသော မမသန့်ရဲ့ လက်နဲ့ အင်္ဂါ ကလိနေပုံကို စိတ်ထဲမှန်းပြီး ကိုယ့် ပစ္စည်းကို သုတ်ထွက်သွားအောင် လက်ဆော့ပြစ်လိုက်သည်. စိတ်ကူးလည်းယဉ်, ထွက်လည်းမထွက်ရဲတာကြောင့် တော်တော်ကြာသွားသည်။ အိမ်သာတံခါးခေါက်သံကြောင့် ‘ ခင်ဗျာ မမ’ ဟုထူးလိုက်သောအခါ ‘မောင်လေး ကော်ဖီသောက်ရအောင်’ ပြောသွားသည်။
မျက်နှာပူစွာဖြင့် ဧည့်ခန်းထိုင်ခုံထိုင်ပြီး ကော်ဖီပူတစ်ခွက်ကို ခေါင်းငုံ့ ကာသောက်လိုက်သည်. ကော်ဖီတစ်ဝက်လောက်အကုန်တွင် ခေါင်းဆက်ခနဲ အမော့လိုက်တွင် ‘မောင်လေး လျှာတွေပူနေအုံးမယ် ဖြေးဖြေးသောက်ပါ’ ‘ဟုတ်ကဲ့ မမ အားနာနေလို့ပါ တောင်းပန်ပါတယ်နော်’ ‘ရပါတယ် မောင်လေးရယ်မလိုပါဘူး တိုက်ဆိုင်သွားတာပါ’ ဟု အပြုံးမျက်နှာဖြင့် မမသန့်ပြန်ပြောလာသည်. ‘ခွင့်လွှတ်တယ်ပေါ့ နော် မမ နောက်နေ့မုန့်ပို့ရင် အိမ်ကအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို လွှတ်လိုက်မယ်နော်’ ‘မောင်လေးရယ် အဲလောက်ကြီး မလိုပါဘူး ပုံမှန်ပဲ အိမ်ကို ဝင်ထွက်သွားလာပါ မမက အအိုတစ်ခုလပ်ပါ ဒါမျိုးတွေက ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး ဒီမယ်မောင်လေးကိုပြောမယ်နော် နောက်နေ့လည်း အမြဲပုံမှန်လာရမယ်နော်။ အခုလည်း ကော်ဖီကို ဖြေးဖြေးသောက် အိမ်ကလူတွေအကုန် ရွာကအလူကို ပြန်သွားကြတယ် နှစ်ညအိပ်ကြာမှာ ဘယ်သူမှ မျက်နှာပူစရာ မရှိဘူး’။
‘ဟုတ်ကဲ့ မမ ကျွန်တော်က မမကိုမျက်နှာပူတာပါ’ ‘ကဲ မောင်လေးလဲ မျက်နှာမပူရအောင် မမပြောတာနားထောင်’ ‘ဟုတ် မမ’ ‘မောင်လေးအချိန်ရလား’ ကျွန်တော် ခေါင်းညိမ့်ကာ မမပြောလာမယ့် စကားကိုနားထောင်နေလိုက်သည်. ‘မောင်လေး မိန်းမတွေနဲ့ ကာမဆက်ဆံဘူးလား အမှန်အတိုင်းပြောနော်’ ရုတ်တရက်မထင်မှတ်သော မမစကားကြောင့် ‘အာ မမကလည်း ဘာမှန်းမသိဘူး’ ရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်ပြောကာ ခေါင်းငုံ့နေလိုက်သည်။ ခဏလောက်ကြာတော့ ရယ်သံသဲ့သဲ့ပါသော အသံဖြင့် ‘မောင်လေးခေါင်းမော့ပါအုံး ပြန်ဖြေအုံးလေ’ ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းငုံ့ရင်းနဲ့ပဲ ‘ဟုတ် မမ အခုအချိန်ထိ ဆယ် ခါ ဆယ့်ငါးခါ လောက်တော့ ရှိမယ် ‘ ‘ဟုတ်ပါပြီ မောင်လေး ရည်းစားနဲ့လား’ ‘ မဟုတ်ပါဘူး ကွန်တော်မှာ ရည်းစား မရှိပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားကြတာပါ’ ‘ အဲဒါဆို မကောင်းတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ပေါ့ မမ မေးပါအုံးမယ် မောင်လေး ရောဂါကူးမှာ မကြောက်ဘူးလား။
ယောကျာ်းအများကြီးနဲ့ ဆက်ဆံထားတဲ့ မိန်းမတွေကို’ ‘ရောဂါကူးမှာတော့ ကြောက်တာပေါ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဇွတ်အတင်းခေါ်တော့ လိုက်သွားရတာပါ’ ဟု ကျွန်တော် ပြန်ပြောလိုက်သည်. ‘မောင်လေးရယ် ဇွတ်ခေါ်လို့လိုက်သွားလည်း ကိုယ်လုပ်ချင်မှ ဖြစ်တာပါ မောင်လေး စိတ်ကိုက ဆက်ဆံချင်နေလို့ပါ မဟုတ်ဘူးလား’ ‘မမမေးတာတွေက ကျွန်တော် မနေတတ်တော့ဘူး ပြန်တော့မယ်’ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ‘ နေပါအုံး မောင်လေးရယ် အစ်မလည်း တစ်ယောက်တဲ ပျင်းနေလို့ပါ မောင်လေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောချင်တာနဲ့ ဆိုင်တောင် မောင်လေးအိမ်သာတက်တုန်းကတည်းက ပိတ်ထားလိုက်တာရှေ့ကြည့်လိုက်ပါအုံး မပြန်ရသေးဘူးနော် ပြန်မှ မမစိတ်ဆိုးမှာ ဒါပဲ’ ‘မမက ဘာတွေမေးနေမှန်းမှ မသိတာ’ ‘မောင်လေးရယ် မမက ပါးစပ်နဲ့ပဲ မေးရုံလေးပါ မောင်လေးဆို မမ အခန်းထဲမှာ လက်နဲ့ကလိနေတာကို အကုန်လုံးမြင်ထားတာ မမတောင်မရှက်တော့ဘူး။
ဟုတ်လားပြော’ ‘ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မမပျင်းနေရင် တစ်ခြားအကြောင်း ပြောရအောင်’ ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်. ‘မမက အခု ဒီအကြောင်းပဲ စိတ်ဝင်စားတာ ဆက်ပြောမယ် အဲဒီမကောင်းတဲ့ အိမ်ကိုရောက်တော့ မောင်လေး ဆက်ဆံတဲ့ မိန်းမတွေက ငယ်ငယ်လေးလား အကြီးတွေရောပါလား’ ‘ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေက ပြောတယ် အကြီးနဲ့နေမှ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဆက်ဆံရတာ အဆင်ပြေမှာ ဆိုတာနဲ့ အကြီးတွေနဲ့ပဲ နေတာ’ ။ ‘ဘယ်အရွယ်တွေလဲ မောင်လေး မမလို အရွယ်လောက်တွေပါလား’ ကျွန်တော် မမမျက်နှာနဲ့မျက်ဝန်းလှလှကို သေချာကြည့်ကာ ‘ ပါပါတယ် အမလို့’ ပြန်ပြောလိုက်သည်။မမလို အသက်အရွယ် မောင်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟင်’ ကျွန်တော် မမကိုသေချာ ကြည့်မိသွားသည်. မမက လှသည် အသားဖြူသည် ခန္ဒာကိုယ်လည်း ကြည့်လို့ကောင်းသည် ခြုံပြောရရင် ကျွန်တော် မမကို ကြိုက်သည်. ‘မောင်လေး ဖြေအုံးလေ’ ဟု မမမေးလာမှ သတိဝင်လာသည်။
‘ဟုတ် မမ ကို ကြိုက်ပါတယ်’ ဟု အမြန်ပြန်ပြောလိုက်သည့် စကားတွင် အမှားပါသွားသည်. ကျွန်တော် တောင်းပန်စကားပြောမည် အလုပ်တွင် စိတ်မဆိုးသောမျက်နှာဖြင့် ‘တစ်ကယ်လား မောင်လေး’ မေးလာသည်. ကျွန်တော် ခေါင်းငုံ့ကာ ညိမ်နေလိုက်သည်. ‘ဒီမယ် မောင်လေး မမခံစားချက်ကို မောင်လေးကို ပြောပြမယ်နော် မမ အိမ်ထောင်ကွဲနေတာ သုံးနှစ်ကြာခဲ့ပြီ နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့တော့ စိတ်ကူးလုံးဝ မရှိတော့ဘူး ။ ဒါပေမယ့် မမမှာ သွေးသားခံစားချက်တော့ ရှိသေးတဲ့ အရွယ်ပဲ ရှိသေးတာပါ မောင်လေးထက်တော့ အသက် နဲနဲကြီးတာပေါ့ ဒီတော့မမ မောင်လေး ကို တစ်ခုမေးချင်တယ် မရှက်နဲ့နော်’ ‘ဟုတ် မမ’ လို့ ခေါင်းငုံ့ရင်းနဲ့ပဲ ပြောလိုက်သည်. ‘ မမ ရဲ့ အသက်အရွယ် ခန္ဒာကိုယ်က မောင်လေး ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး ရှိသေးလားဟင်’ စိတ်ထဲရှုတ်ထွေးနေသော ကျွန်တော်သည် ဘာပြောရမှန်းမသိပဲ ညိမ်နေမိသည်. ခဏလောက်ကြာသွားတော့ ။
‘မောင်လေး မဖြေနှိင်ဘူးလား အမ သိချင်လို့ပါ မကြိုက်ရင်လည်း ရပါတယ် မောင်လေး ငြင်းရမှာ အားမနာပါနဲ့ အမ သဘောပေါက်ပါပြီ တောင်းပန်တယ်နော် မောင်လေး ကော်ဖီ ဆက်သောက်သွားပါအုံးနော်’ ကျွန်တော် ငြိမ်သက်စွာ စဉ်းစားနေသည်. မမရဲ့ လက်နဲ့ ကလိနေပုံ ဟိုအရင်က ဒီအိမ်ရောက်တိုင်း အမြဲကြည့်မိဖူးတဲ့ မမနောက်ကျော လှပမှု တွေးရင်း ကာမစိတ်တွေပြင်းထန်လာသည်. ကော်ဖီလက်ကျန်ကို အမြန်မော့်ပြီး ‘ မမကို ကြိုက်ပါတယ်’ လို့ အားတင်းကာ ပြန်ပြောလိုက်သည်။ အံ့ အောသွားသော မျက်နှာဖြင့် ‘တကယ်လား ဟုတ်လို့လား မောင်လေး’ ‘ဟုတ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ငရဲကြီးမှာ ကြောက်တယ်’ ‘အယ် မောင်လေးကလည်း မမ ကအခု လွတ်လပ်သူ ဖြစ်နေပါပြီ မမ ကြည်ဖြူပါတယ် တောင့်တနေရတာ ကြာခဲ့ပါပြီ’ ကျွန်တော် ဦးနှောက်အသိ နဲ့ ကာမစိတ်တို့ လွန်ဆွဲနေရင်း ‘ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကိုသွားကြမလဲဟင် မမ’ လို့ မေးလိုက်မိသည်။
‘ ဘယ်မှ သွားစရာမလိုဘူး အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိတာ အခန်းထဲကို သွားကြမယ်လေ မောင်လေး’ ‘ ဟုတ် မမ’ လို့ ပြောရင်း မမနောက်ကနေ လိုက်သွားသည်. အခန်းထဲ အရောက်တွင် ကုတင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသော မမ ၏ ရှေတွင် ဘယ်ကစရမှန်းမသိပဲ မတ်တတ်ရပ်နေမိသည်။ ‘ မောင်လေး စိတ်ကိုလျှော့ထားနော် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ ဥုစ္စာ ‘ လို့ ပြောရင်း ကျွန်တော် ဝတ်ထားသော ပုဆိုးကို အကုန်ချွတ်ချလိုက်သည်. ကျွန်တော်၏ လီးကို မမ လက်နဲ့ဖြေးဖြေးကိုင်ရင်း ‘မောင်လေး အမွှေးတွေ ရိပ်ထားတာလား ပြောင်နေတာပဲ မမလည်း အမွှေးရှည်ရင် မနေတတ်ဘူး မနက်ကမှ ရိပ်ထားတာ ပြောင်နေတာပဲ လာကတင်ပေါ် အိပ်လိုက်’ ဟု ဆိုကာ ကျွန်တော့် လက်ကျန်အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်. မမလည်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ အဝတ်များကို အကုန်ဖယ်လိုက်ပြီး ‘မောင်လေး မမ အလှတွေ ကျန်သေးလားဟင်’ ‘မမကလှပြီးသားပါ ဒီရောက်တိုင်း မမနောက်ကနေ အမြဲကြည့်တယ် ပြီးရင် စိတ်ကူးယဉ်တယ်’။
‘ဟုတ်လား ကဲ ဒါဆို ခုလက်တွေ့ စလိုက်ကြစို့’ ဟုပြောကာ ညင်သာသောလက်ကလေးများဖြင့် လီး ကိုပွတ်သပ်ပေးနေသည်. စောစောကမှ ဂွင်းတိုက်ထားသော လီး မှာ အရည်တွေ ရွှဲနေပေမယ့် မတောင်နိုင်သေးပါ။ ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကာ အမြဲငေးကြည့်ခဲ့ရသော မမ ရဲ့ ဖင်ကြီးတပြင်လုံးကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည်. နွေးသော ခံစားချက်ကို ကျွန်တော့်လီး၏ ထိပ်တွင် ခံစားမိသောအခါ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ရုတ်ခနဲ လီး ဆီကိုကြည့်လိုက်တော့ လီးကိုဖြေးညှင်းစွာ စုပ်နေသော မမ ကို တွေ့လိုက်ရသည်. ဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေစဉ် ‘ မောင်လေး ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာ ကောင်းလားဟင်’ ကျွန်တော် ခေါင်းညိပ့်လိုက်သည်. ဖြေးဖြေးမြန်လာသော မမ ၏ စုပ်ပေးမှုကြောင့် လီးမှာ တင်းမာလာနေသည်. ကျွန်တော်လည်း မမ ကို ကောင်းအောင်လက်နဲ့ မမရဲ့ စောက်ပတ် ကို အောကားတွေထဲကလို ကလိပေးနေလိုက်သည် ဒီလိုနဲ့ နာရီဝက်လောက် ကြာသွားတော့။
‘မောင်လေး လုပ်လို့ရပြီလား ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးတာ ကောင်းလားဟင်’ ‘ ဟုတ် မမ ကျွန်တော် ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိတော့ဘူး’။ ‘ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို မမ အပေါ်ကတက်လုပ်တော့မယ်နော်’ ‘ဟုတ် မမ’ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်. ကျွန်တော့် အပေါ်တွင် ခွလျှက် ရောက်နေသော မမသည် လီး ကိုလက်နဲ့ကိုင်ကာ စောက်ဖုတ် အဝသို့တေ့ပြီး ဖြေးညှင်းစွာ ကျွန်တော့်၏ လီး ဆုံးသွားသည် အထိ ဖိချ လိုက်ကာ ခဏတာ ငြိမ်နေသည်. ကျွန်တော် မြင်နေရသော မမသည် အင်မတန်လိုချင် လိုအပ်နေသော အရသာတစ်ခုကို စတင်မည်းစမ်းလိုက်ရသော ခံစားချက်မျိုး မမမျက်နှာတွင် တွေ့နေရသည်. ‘မောင်လေး အဆင်ပြေရဲ့လား’ လို့ မမမေးတဲ့ အသံမှာ ဖီးအပြည့်နဲ့ပေါ့. ‘ ဟုတ်ကောင်းပါတယ် မမ ကောင်းအောင် ကြိုက်သလိုလုပ်ပါ အဆင်ပြေပါတယ်’ ဟု ကျွန်တော်ပြောပြီးနောက် ခက်သွက်သွက် မနားတမ်း ဆောင့်တော့သည်. မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက်ကြာသောအခါ မမရဲ့ အသက်ရှူသံတွေပြင်းလာပြီး။
မမပြီးပြီ မောင်လေးရယ် ကောင်းလိုက်တာ… ဟုဆိုကာ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ပေါ် မှောက်ချလိုက်သည်။ မမ ကျွန်တော့် ကို နမ်းသည်. ‘ခုမောင်လေးက မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ မမဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင်’ . ကျွန်တော်ရဲ့ လက်အစုံကလည်း မမရဲ့ တင်ပါးနှစ်ချမ်းပေါ်တွင် ဖိသပ်ကာ ပွတ်သပ်ပေးရင်း ‘မမ အောက်ဆင်းပြီး မတ်တက်ရပ် ကုန်းလုပ်လို့မမ ရမလားဟင်’ ‘ဖြစ်တယ်လေ’ ဟု ပြောကာ ကိုယ်ပေါ်မှ လှိမ့်ဆင်းသွားသည်။ကုတင်ဘက်ပြန်လှည့်ကာ လက်ထောက်ကုန်းထားသော မမ ရဲ့ အနေအထားဟာ ကျောင်းသားသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်အတွက် တစ်ချက်ခြင်းစီးချက်ညီညီ လွယ်ကူစွာ ဆက်ဆံရ၍ မပင်ပန်းလှပေ. ‘မောင်လေး စိတ်ရှိသလို ချနော် မမကို မငဲ့နဲ့ မမလည်း ကောင်းတယ်’ ဟု မမပြောနေပေမယ့် အိမ်သာထဲတွင် လတ်တလော ဂွင်းတိုက်လာခဲ့သော လီး မှာ ဒီလောက်လုပ်ချိန်လေးနဲ့ ခရီးတစ်ဝက်ပင်မရောက်သေးချေ။
ခပ်မြန်မြန်သွက်စေချင်ပုံရသော မမ၏ လက်တစ်ဖက်သည် ကျွန်တော်ပေါင်တံကို ဆွဲဆွဲကပ်နေသည် ဆယ့်ငါး မိနစ်ခန့် ကျွန်တော် ခပ်တင်းတင်း, ခပ်မြန်မြန် မနားတမ်းလုပ်လိုက်သောအခါ။ ‘အင်းအင်း’ ဟုသော ညည်းသံများနှင့် ကုတင်ပေါ်ခင်းထားသော စောင်အထူကို လက်ဖြင့် ဆွဲကိုင်ကာ ရှေ့သို့လှဲချသွားသည်. မတ်တပ်ရပ်ရင်း ကျန်နေသော ကျွန်တော်သည် လက်နှင့် လီးကို ဖြေးဖြေးဂွင်းတိုက်ပြီး မမရဲ့ နှစ်ကြိမ်မြောက် ဆန္ဒပြည့်စုံ သွားသည့်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူမိနေသည်. ခဏနေ အပြင်ရေသွားသောက်ပြီး အခန်းပြန်ဝင်လာတော့ ကျေနပ်သော အပြုံးများဖြင့် ကြိုနေသော မမ က ‘မောင်လေးက ဘာလို့ပြီးအောင် မလုပ်တာလဲ မမလုံလောက်သွားပြီရှင့်’ ဟု အသံလေးတွေ ရွှင်နေသည် ‘လာကုတင်ပေါ်အိပ်’ ဟု ပွတ်သပ်ခေါ်ပြီး ကျွန်တော်ကို ပက်လက်အနေအထားဖြင့် သူ၏ လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ဂွင်းစတိုက်ပေးနေသည်။
ဖြူဖွေးသွယ်လျှသော မမရဲ့ လက်ချောင်းများက ခံစားချက်အတွက် ကောင်းလှသော်လည်း မပြီးနိုင် လက်ညောင်းလို့တဖက်ပြောင်းဆော့ ပေးနေသော မမကို အားနားလှသည် မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်ကြာသည်အထိ။ အမြန်အမျိုးမျိုး ဆော့ပေးနေသော မမ လက်တွေကို သနားမိသော်လည်း အိပ်ရာပေါ် လှန်အိပ်ပြီး လက်တဖတ်က မမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ပွတ်သပ်ဆုပ်ညှစ်ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖတ်က ဆေးလိပ်အနု ရှိုက်ကာ ဖီးအပြည့် ဇိမ်ယူရသည်မှာ အိမ်ထောင်သည် လင်မယားဘဝရောက်သွားသလို ကျွန်တော် ခံစားမိသည်. အရင်က အိမ်တစ်အိမ်ကို သူငယ်ချင်းများနဲ့ရောက် , အထဲရောက်တာနဲ့ ဖြစ်နိုင်သမျှ မိန်းကလေးကို မထပ်အောင်ရွေး ပြီးရင် သူမ ခေါ်တဲ့နောက်ကလိုက် ,တခါးပိတ် ပုဆိုးဂွင်းလုံးချွတ် ကုတင်ပေါ်တက် ပက်လက်လှန်။
တစ်နေကုန်နီးနီး ယောင်္ကျားအစုံဖြင့် ဆက်ဆံထားရသဖြင့် နွမ်းလျှစိတ်မပါသော မိန်းကလေး၏ လက်နှင့် သုံး မိနစ်လောက် လီးကိုဆွကာ ကွိုင်ကိုစွပ်ကာ ယောင်္ကျားရဲ့ မြင်ကွင်းတွင် သုံးချက်လောက် အပေါ်ကဆောင့်ပြီးသူဖီးလာ , ပြီးချင်သော အမူအရာဖြင့် ဆယ့်ငါး ချက်လောက် ဆောင့်ပြီး ညောင်းတယ်ပြောကာ စိတ်မရှည်သော မိန်းမများနှင့်သာ တွေ့ဘူးခဲ့သော လူပျိုအတွက်။ မမနဲ့ ဒီလိုနေနေရသည်မှာ ကာမခံစားမှုတစ်ခုဆိုတာထက်ပိုသော အိမ်ထောင်သည်လင်မယားအသွင် ကြည်နူးမိသော အတွေးများ ကျွန်တော် ခံစားရသည်။လက်ညောင်းနေပေမယ့် သူမ၏ ပြုစုမှုနဲ့ ကျွန်တော်ကို သုတ်ထွက်ပြီးစေချင်သော စေတနာပိုသော အကြင်နာမမကို နားစေချင်တာရယ် , စိတ်ထဲမှာ မေးချင်တာလေးရှိတာကြောင့် အမြဲပွတ်သတ်ပေးနေသော လက်က စိတ်အတွေးနှင့် တပြိုင်တည်း ကျွန်တော့်ဘေးကပ်ရပ်သို့ စွေ့ကနဲ လှဲချလိုက်သည်.’ မမကို ကျွန်တော် မေးစရာလေးရှိလို့ ‘။
မေးပါရှင်…. ဆိုသော ပျော်နေသောလေသံဖြင့်ပြောကာ ကျွန်တော်ပါးပြင်လေးကို အာဘွားပေးသွားသည် ‘မမ ကောင်းလား, စိတ်ကျေနပ်ရဲ့လားဟင်’ မမပြုံးသွားပြီး ‘ပိုလို့တောင် ရှန်ချင်နေပြီ’ ‘ပိုလိုက်တာ မရယ် , မမယောင်္ကျားကိုတော့ မမှီနိုင်ပါဘူး ပြီးတော့ လီးနှစ်ချောင်း ဘာကွာလဲဟင် မမ’ မမဖြတ်ကနဲ သူ့လက်နှင့် လီးကိုဆုပ်ကိုင်ကာ မျက်နှာနှင့် ထိမလောက်နီးနီး သေချာပတ်ကြည့်ကာ မျက်နှာကို မခွာသေးပဲ ‘ ဟို ဖိုးသမားဟာက နဲနဲပိုရှည်တယ် , အတုတ်ကတော့ တူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူက သူတစ်ယောက်ထဲပဲ ဖိုးချလာပြီး နတ်ပြည်ရောက်နေတာ , မမအတွက် နှစ်ခါပြီးဖို့ဆိုတာ ညားကတည်းက ရှားမှရှား တစ်ခါလောက်ကို အနိုင်နိုင်ရယ် ကွာလှပါတယ်ကွယ် , ပြီးတော့ မောင်လေးရဲ့ ဒစ်တစ်ခုလုံးက ဖွေးရဲနေတာပဲ , အသုံးမနာသေးတဲ့ ပစ္စည်းအလတ်ကြီးပဲ ‘ ဟု ရည်သံသဲ့သဲ့ဖြင့် ပြောကာ ကျွန်တော်၏ ဖွားဘက်တော် လီး ကို ပြွတ်ကနဲ နမ်းကာ အဆုံးထိရောက်အောင် မမ ပါးစပ်ဖြင့် ငုံချလိုက်လေသည်။
မိန်းမတစ်ယောက်၏ နှုတ်ခမ်းသားနှင့် ကြားခံ ကွိုင်စွပ်ဖြင့်သာ စုတ်ယူပြုလုပ်၍ ခံစားရသော ဖီးနှင့် ယခုအရသာ အတွေ့ထူးမှု အလွန်ကွာလှသည် ဆယ် စက္ကန့်ခန့် အသိမေ့သွားကာ အားနာစရာ , ငရဲကြီးနိုင်သော လုပ်ရပ်ကို မတားဆီးမိခဲ့ပါ. ‘ မမ မလုပ်သင့်ပါဘူး’ လို့ ပြောကာ လက်ဖြင့် အမြန်ဆွဲကိုင်လိုက်သော မမ ရဲ့ ခေါင်းသည် ပို၍ပင်ငုံ့ကာ လီး ကို အဆုံးထိရောက်အောင် ဖိကပ်ပြီး ညိမ်နေလိုက်သေးသည်. ကာမခံစားရမှု၏ ကောင်းခြင်း နှင့် အားနာမျက်နှာပူရသော အဖြစ်အပျက်နှစ် ခုကြား ဒွိဟဖြစ်နေသော ကျွန်တော်သည် စကားလုံးအချို့ကို မမ ကို ပြောလိုက်မိသည်။ ‘ ကျွန်တော်တို့ လက်ထက်ကြမလားဟင် မမ’ . ငုံ့နေရာမှ ပြွတ်ကနဲဖြုတ်ကာ ခေါင်းမော့ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ပါးပြင်နှစ်ဖက်ကို နူးညံ့သောလက်ဖြင့် ညင်သာစွာ ပွတ်ပြီး ‘ မောင်လေးရယ် ခဏတာခံစားမှုနဲ့ မောင်လေးရဲ့ လူပျိုဂုဏ်ဘဝကို မလဲရဘူးနော်။
အခုခနနေ မောင်လေးရဲ့ သုတ်ရည်ထွက်ပြီးသွားရင် ကိစ္စပြီးသွားပြီ, ခဏနား အမောဖြေ အိမ်ပြန် အိပ် ဒါပဲ , ဟုတ်ပြီနော် , ကဲအခုပြန်လှဲပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆင်းပြီးကားထား’ ‘မမ ငရဲကြီးလိမ့်မယ် မလုပ်ပါနဲ့ မောင်လေး ဘာသာ ဂွင်းတိုက်လိုက်ရင် ခဏပဲ မလုပ်ပါနဲ့နော်’ . သူကိုယ်တိုင် ပြီးအောင်ပြုစုပေးမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသော မမ ၏ အသိစိတ်ဟာ ကျွန်တော်၏ တားဆီးမှုကို မတိုးတော့ , ကျွန်တော် အသံကျယ်သွားမှ ဘေးအိမ်တွေ ကြားရင် ပြသနာ , စိတ်လျှော့ကာ ထိတွေ့မှုအရသာ ဖီး ကိုခံစားနေလိုက်မိသည်. ပါးစပ်စုပ်ပေးမှု ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် ကြာသွားသော မမ ၏ ပါးစပ်သည် ဂွေးဥ နှစ်လုံးဆီ ရောက်သွားကာ။ ဥနှစ်လုံးကို လျှာဖြင့် ကစားရင်း လီး အချောင်းတိုင်ကို လက်ဖြင့် ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည် ထိတွေ့မှု အရသာမျိုးစုံဖြင့် တွေ့ကြုံနေပြီဖြစ်သော ကျွန်တော်သည် ‘ မမ ရပ်လိုက်ပါတော့ နှစ်ယောက်အတူတူ လုပ်ကြရအောင် ‘ ‘ဒီတိုင်းပဲ ဇိမ်ယူနေစမ်းပါကွာ’။
‘အတူတူကောင်းချင်လို့ပါ မရယ်နော်’ ‘ ဟုတ်ပါပြီ မောင်လေး ဘယ်လိုလုပ်ချင်တုန်းကွယ်’ .ကျွန်တော် စဉ်းစားထားသော ပုံစံများက ဥရောပအောကားများစွာ ထဲက မှတ်ထားပြီးသားပုံ. ‘ကဲ မမ ဒီစားပွဲနှုတ်ခမ်းနားကို ဘေးတစောင်းလှဲလိုက်နော် , မမကို သုံးခါလုံး ပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့ ပြီးသွားအောင် လုပ်ပေးမလို့လေ’ လို့ ပြောရင်းပဲ မမချေထောက်တစ်ချေင်းကို ပုခုံးနားတွင် လက်တစ်ဖက်ပိုက်ခါ ကျန်လက်က မမ ရဲ့ မိန်းမအင်္ဂါ နဲ့ အစိထိပ်လေးကို ပွတ်ရင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက် အကြိမ်များများ ဆော်ထည့် လိုက်ရာ ကာမအရသာ ပြည့်စုံလွန်းသော မျက်နှာအမူရာမှာ အထင်းသား , မမ သုံး ခါ ပြီးသွားပြီး ခုတင်ပေါ်သို့ နှစ်ယောက်သား လှဲချကာ။ တစ်ယောက် ပစ္စည်းကို တစ်ယောက်က ပွတ်သပ်ပေးရင်း ခဏ အမောဖြေလိုက်သည်. ‘ မောင်လေး လုပ်ပေးတာ ပုံစံတွေကို စုံသွားတာပဲ , အရသာအမျိုးမျိုးခံစားမိတယ် , ဇာတ်ကားတွေ ထဲက အတိုင်းပဲ ‘ ‘ဟင် မမ ရော ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ‘။
ကြည့်ရုံဘယ်ကမလဲ မမ ယောင်္ကျားနဲ့ လုပ်တုန်းကဆို သူလုပ်ချင်တယ့်ပုံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလုပ်တယ် ဒါပေမယ့် မောင်လေးလို ပုံစံတစ်မျိုးကို မမ တစ်ခါပြီးသလိုတော့ မကြာပါဘူး , ဒီကြားထဲ ဇာတ်ကားထဲကလို ဖင်ပေါက်ထဲ လုပ်မယ်ဆိုလို့ သဘာဝမဟုတ်တာကိုကြ ဇွတ်လုပ်တယ်, မမဖြင့် ကောင်းနိုးကောင်းနိုးနဲ့ အလကားပဲ’ ‘မမ ကျွန်တော် သိချင်လာလို့ပါ , မမဖင်ထဲကို မမယောကျာ်း လီးနဲ့ လုပ်တာ ခံနီုင်တယ်ပေါ့ မနာဘူးလား’ ‘မနာပါဘူး အရသာလဲ မရှိဘူး’ ‘ဒါဆို မမခွင့်ပြုရင် ကျွန်တော် ဖင်ပေါက်ထဲ မလုပ်ဖူးသေးလို့ ခဏထည့်ကြည့်ချင်တယ်’။ ‘ရပါတယ် လုပ်ပေါ့ ‘ ဟုပြောကာ မှန်တင်ခုံပေါ်က အုန်းဆီပုလင်းကို ယူပြီး မမသည် သူ့လက်နှင့် အုံးဆီလူးကာ ဖင်ပေါက်ထဲကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း နှိုက်နေသည်. ကျွန်တော်လည်း မမနားတိုးပြီး အဖုတ်ကို လက်နဲ့ ကလိပေးရင်း အပျိုစင်နီူပါး အလှကျန်သေးသော မမနို့ကို ပါးစပ်ဖြင့် အဝအပြဲ စို့ပြစ်လိုက်သည်။
ခဏကြာတော့ ‘ရပြီ လုပ်ကြစို့ ‘ ဟုပြောကာကုတင်ပေါ်လှဲကာ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မမလက်တွေနဲ့ ဆွဲမပြီး ကဲ မောင်လေး ဖင်ပေါက်ရဲ့ အရသာ ခံစားကြည့်ပါ’ ဟုပြောလေသည်. ခြေထောက်များ မထား၍ အမြင်ရှင်းနေသော ဖင်တင်းတင်းကြီးကို ကြည့်ပြီးလီးကိုခက်သွက်သွက် ပြန်တောင်အောင်တိုက်လိုက်ကာဆီရွှဲနေသောဖင်ပေါက်ဝကို တေ့ကာ ဖြေးဖြေးခြင်း စတင်ထည့်လိုက်သည်. လီးသည် ဖင်ပေါက်ထဲကို အလွယ်တကူ မဝင်နိုင် , အားတင်းပြီး တောင့်ကာ ဖိထည့်လိုက်မှ ကျွန်တော် လီး၏ ဒစ်ခေါင်းသည်။ မမ ရဲ့ဖင်ပေါက်ထဲကို မြုပ်ဝင်သွားသည် ‘မမနာလား အဆင်ပြေရဲ့လား ‘ ‘ ရတယ် မောင်လေးသာ ဖီး ရှိရဲ့လား ‘ ‘ မသိသေးဘူး မမ , ခုတောင် အဆုံးထိရောက်အောင် မနဲသွင်းရမှာ မမနာရင် ပြောနော်’ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ဖြင့် ကျွန်တော် လီးကြီးသည် ဘဝ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖင်လိုးဖူးခြင်းကို စတင်ခံစားရသည်။
ဖင်ပေါက်တလျှောက်လုံး၏ တင်းကြပ်ဆုပ်ယူခြင်း ခံထားရသော ကျွန်တော့်၏ လီး တစ်ပတ်လုံးမှာ အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုရဲ့ အရသာဟာ ထူးကဲလှသည်. ကောင်းလွန်းသောဖီး များ ခံစားမိနေသော ကျွန်တော်ကို မမ မေးလာသည်. ‘ ဘယ်လိုနေလဲ မောင်လေး , အဆင်ပြေရဲ့လား , မမ ကတော့ မနာဘူး’ ‘ ဟုတ် မမ အဲဒါဆို သွက်သွက်လေး လုပ်ကြည့်မယ်နော်’ ဟု ပြောကာ မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက် မနားတမ်းအားအင် အပြည့်နှင့် လုပ်နေသည်. ‘ အား…အား…, မောင်လေး ‘လို့ ညည်းသံကိုကြားလို့ မမမျက်နှာကို ကြည့်မိလိုက်တော့ သူ့နှုတ်ခမ်းကိုသူ ကျိပ်ကိုက်ပြီး ခပ်မဲ့မဲ့ဖြစ်နေသော မမ မျက်နှာကို မြင်မိသည်။ ဆောင့်လုပ်ခြင်းကို ကျွန်တော် ရပ်လိုက်ပြီး ‘ မမ နာနေလို့လား ရရဲ့လားဟင် ‘ ‘မောင်လေး ရော ဘယ်လိုလဲ ကောင်းရဲ့လာ’ လို့ ပြောကာ ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်က ချွေးတွေကို သူ့လက်နဲ့ သုတ်ပေးနေသည်. ‘ကောင်းတာပေါ့ မမရဲ့ ကျွန်တော် ပြီးတောင်ပြီးချင်နေပြီ အမိုက်ဆုံး ဖီးပဲ’။
ကဲ ဒါဆို မောင်လေးပြီးအောင် လုပ်တော့, ပုံစံပြောင်းအုံးမလား’ ဒီအတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ် , မမ နို့တွေကို လုပ်ရင်းနဲ့ စို့အုံးမှာ’ လို့ပြောရင်း ဖင်ထဲ အဆုံးထိ ထည့်ထားသော လီးကြီးကို စတင်ကစားလိုက်တော့သည်. မမ နို့တွေကို ကုန်းစို့ရင်း လုပ်နေသည်မှာ နာရီဝတ်ခန့် ကြာသွားသော အခါ ပြီးချင်လာသော အင်မတန်ကောင်းသည့်အရသာကို ခစားလာရသည်. ‘မမ ကျွန်တော် ပြီးချင်လာပြီ , ပြီးလိုက်တော့မယ်နော်’ ‘ရတယ် မောင်လေး ကောင်းရင် ပြီးရော’ ‘ဟုတ် မမ ကျွန်တော် နဲနဲမြန်မြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်’ မမခေါင်းညိမ့်ပြသည်နှင့် တပြိုင်နက် အပေါ်ထောင်ထားသော မမပေါင်တံကို ဆွဲဆွဲပြီးခပ်မြန်မြန် လုပ်ပြစ်လိုက်သည် မမ၏ ညည်းသံနှင့်အတူ ကျွန်တော်၏ ဖီးတက်လာပြီး မမရဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲကို သုတ်ပိုးများပန်းထွက်သွားကာ နှစ်ဦးသားလုံး ပွေ့ဖက်ကာ ညိမ်သက်နေမိသည် အဝတ်တွေဝတ်ပြီး ပြန်ကာနီးတွင် ညရင်ရင်ဖုန်းဆက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့တော့သည်….. ပြီးပါပြီ။
ကျွန်​​တော်​ တကယ်​ချစ်​ခဲ့​မိသော အခါ